VIDIO | RayHaber | raillynews
[28 / 05 / 2020] Nkeji Ikpeazu: Ewepụrụ ụfọdụ Coronavirus	coronavirus
[28 / 05 / 2020] Onye isi ala Erdoğan: Oge mgbago nke 65 afọ ga-aga n'ihu	coronavirus
[28 / 05 / 2020] Onye isi ala Erdogan: N’agha wepụrụ ihe mgbochi njem na gburugburu	coronavirus
[28 / 05 / 2020] Mgbe Mkpokọta na Mwepu?	06 Ankara
RayTube VIDIO : Vidiyo ụgbọ oloko, Vidiyo ụgbọ oloko dị elu, Vidiyo TCDD, Vidiyo Tram
Minister nke Energy na eke akụ Dönmez kwuru, "Sgbọ mmiri Fatih Emechara emecha nkwadebe maka mbufe Oké Osimiri Ojii. Shipgbọ mmiri anyị dị njikere maka ịgafe Bosphorus. Fatih, na 29th nke Mee, na ncheta nke mmeri obi ụtọ, njem Oke Osimiri Ojii [More ...]
Truckgbọ mmiri na-aga Mersin fefere ụgbọ oloko ahụ site na àkwà mmiri. Ọ bụ ezie na gwongworo ahụ dara n'ụgbọ okporo ígwè na-ebugharị na-aga 4-5 track, ọkwọ ụgbọ ala Russia merụrụ ahụ nke ukwuu na ihe mberede ahụ. Dika ozi enwetara, ihe mberede ahu [More ...]
Ekwuputara na ụgbọ elu YHT ga-amalite na 28 Mee. Republic of Turkey State Railways (TCDD) Şgbọ njem A.Ş. ọkacha mmasị n'ụlọ na Life (HPP) nwere koodu, High Speed ​​Train (YHT) nkuzi vidiyo gbasara otu esi enweta tiketi. Citizensmụ amaala, [More ...]
Emi odude ke Adapazari, Sakarya Turkey Wagon Industry Co. Electriclọ ụgbọ ala eletriki, nke emepụtara na (lọ ọrụ (TÜVASAŞ), Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan ga-abịa na Ankara na ncheta afọ 29 nke mmeri nke Istanbul, nke a ga-eme na 567 Mee. [More ...]
Mkpoko ụgbọ agha nke ụgbọelu nke mbụ na-atụghị anya ụgbọelu nke Turkey na Bayraktar AKINCI tiha usoro mmepe nke ọtụtụ ọnwa na-egosi “AKINCI” Akwụkwọ edemede May 24, 2020 ụbọchị Sọnde, ụbọchị mbụ nke ọnwa Ramadan, the You Baykara na elekere 20.23:XNUMXTube [More ...]
Ememe a gbagoro n'ụzọ ụgbọ elu nke Ataköy - Basın Ekspres - İkitelli Metro Line, nke a bidoro n'afọ 2016, ka enwere Ekrem İmamoğlu, onye isi Metrolọ Ọrụ Obodo Metropolitan (İBB) na ndị isi obodo. Ataköy - [More ...]
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. T-129 ATAK Efu na Tactical Reconnaissance Helicopter, nke (TUSAŞ) mepụtara, mere ụgbọ elu pụrụ iche gaa na Mee 19, ncheta nke Atatürk, Youthbọchị Ndị Ntorobịa na Egwuregwu. Turkish Aviation na [More ...]
Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan gara attendedanakkale 1915 Bridge Tower Mmecha Ememe na mkparịta ụka vidiyo ya na Minister nke ofgbọ njem na akụrụngwa Adil Karaismailoğlu. Erdogan na Karaismailoğlu na ememme ahụ na mmezu nke otu n'ime ụlọ elu mmiri ahụ [More ...]
Bulgarian obodo Kardzhali obodo Rusalsko Light n'ime obodo Ali Durmaz mụrụ na 1935, ọ na-abịa Turkey n'afọ 1950, na-ahapụ ihe niile na Bulgaria, ha bido biri na Bursa Mudanya. Azụmaahịa n’oge ndụ ya niile [More ...]
N’agbanyeghi odi nkpa na obi ojoo nke bu oria corona (COVID-19) ntiwapu n’uwa nile, ASELSAN n’iru oru ya n’ime usoro nke usoro n’enweghi nsogbu n’ime ogwugwu ya na inye ya. Factorylọ ọrụ ASELSAN 'Hassa Optik' dị na Sivas [More ...]
Defenselọ ọrụ na-ahụ maka nchekwa na mba ahụ kwupụtara na mgbo mgboagha na ihe ndị metụtara ndụ nke ndị otu na-eyi ọha egwu PKK weghaara na Cukurca na Haftanin mpaghara, n'ebe ugwu Iraq. Na nkwupụta nke Ministry of National Defense; “Anyị dike Commandos rụrụ [More ...]
Map nke Marmaray na Gebze Halkalı Nkwụsị Marmaray na Oge: Marmaray, ọrụ a na - ejikọ n'akụkụ Europe na Eshia nke Istanbul Halkalı na Gebze metro na-akwụsị na oge. [More ...]
KARAYEL Tactical UAV Sistemu bụ nke mbụ na naanị ụgbọ elu ụgbọelu Tactical Unmanned nke edepụtara ma rụpụta ya na ntanetị NATO 'Airworthiness na Civil Airspace' Standard STANAG-4671 maka nyocha na nyocha. KARAYEL usoro, onye ọ bụla [More ...]
Ndị enyemaka enyemaka Robot na-abịakwute Mehmetçi!
Ejirila nkwekọrịta nkata maka otu ọkwa klaasị nke ala abụọ na-ahụ maka ala maka nchekwa nke ụlọ ọrụ nchekwa (SSB) na ASELSAN. Onye isi ala nke Onye isi nchekwa nke Onye isi ala. Dr. İsmail Demir: “Ndị enyemaka enyemaka na-abịakwute Mehmetçi! [More ...]
Prototype nke abụọ nke AKINCI TİHA dị njikere maka ụgbọ elu mbụ
Ihe atụ nke abụọ nke AKINCI Offensive Veail Vehicle (TİHA), nke ndị injinịa Bakkar chepụtara ma usoro mmepụta ya na-aga n'ihu, ga-eme njem ụgbọ elu ya n'oge na-adịghị anya. Baykar Defense Technical Manager Selkaruk Bayraktar Akıncı [More ...]
Thegbọ okporo ígwè na-ebu ngwa ala sitere na Gaziantep ruo Çorlu mezuru njem ya site na Mịnịsta Karaismailoğlu. Onye Minista nke ofgbọ njem na akụrụngwa Adil Karaismailoğlu, ụgbọ ala izizi nke gafere Marmaray na 08.05.2020 [More ...]
Onye isi oche nke Preslọ Ọrụ Nchebe Ndị Isi nke Turkey. Dr. İsmail Demir, onye isi SSBTube O jiri uzo ya zaghachi ajụjụ. N’okwu ya, ebe İsmail Demir tụlere ọnọdụ niile dị na ngalaba ahụ, LHD nke abụọ metụtara TCG TRAKYA. [More ...]
E nyefere Bayraktar TB2 SİHA nye Gendarmerie General Command
Ngwaahịa nchekwa Bay Baytartar TB3 SİHA nyefere ndị Gendarmerie General Command. Onye isi oche nchekwa Defence İsmail Demir kwupụtara nnyefe ahụ site na akaụntụ mgbasa ozi mmekọrịta ya. Demir na-ekerịta: “2 Bayraktar TB3 nye Gendarmerie General Command [More ...]
ASELSAN na KOUSTECH wepụtara kaadị nkesa ike maka UAVs
KOUSTECH ewepụtala “Sistem Nkesa Ike” site na nkwado nke ndị injinia ASELSAN ka a ga-eji rụọ ọrụ n'ụgbọelu ụgbọelu nke aka ya. KOUSTECH, Kocaeli University Autonomous Systems Technologies otu, nwere ndi otu umu akwukwo iri na abuo. [More ...]
N’India, ingbọ ahụ See Ndị Na-arụ Ọrụ Na-eje Ije Ha ..! Ndị ọrụ 16 nwụrụ
N’India, ndị ọrụ na-akwaga mba ọzọ, ndị chere na enweghị usoro iwu ọ bụla na oge ọ ga-eji lọta n’ihi ọrịa coronavirus, nwere ọdachi n’ụzọ n’ụzọ ụlọ ha site n’ịgagharị n’ụzọ ụgbọ oloko mgbe ha rụsịrị ọrụ. Curfew na India na-aga n'ihu, Maharashtra [More ...]
UAVOS mezue nnwale nke ụgbọ agha ana-ebugharị ụgbọ na-achịghị achịkwa
N'iburu ụzọ ụgbọelu nyefee igwe anaghị agafe UVH-170 ụgbọ elu, UAVOS bụ ụzọ na-akpaghị aka na akpaaka site n'aka onye na-ere ahịa nke mbụ wee ruo ebe ahụ site na iji ụzọ ndị ahọtara, wee laghachịkwa ebe ịlaghachi na onye na-ere ahịa na-eji otu ụzọ ahụ. [More ...]
Ire ure mgbe TCDD Tasimaci si na Van gaa Iran na ụbọchị asatọ!
Unere ure na mgbe ụgbọ okporo ígwè na-aga site na Van ruo Iran n'ime ụbọchị asatọ!; Onye na-ekwuchitere CHP Istanbul Mazị Mahmut Tanal kesara vidiyo banyere njem ụgbọ mmiri TCDD site na akaụntụ Twitter ya. TCDD na vidiyo kesara [More ...]
Mgbakọ nke 72 nke ndị ọrụ nọ n'okpuru Mita 1 nke ala si Kıraç
Gọọmentị nke Istanbul haziri ụlọ oriri pụrụ iche nke Kıraç maka Laborbọchị Ndị Ọrụ 1 na idarbọchị Njikọ. A na-eme ka egwu a na-aga n'ihu na redio na telivishọn na akụkọ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ. Pụrụ iche maka Laborbọchị Ọrụ 1 na idardị n’otu [More ...]
Istikbal dị na mbara igwe!
Taa na akụkọ ihe mere eme: 29 May 2006 TÜVASAŞ, Iraqi Railways
Nkeji Ikpeazụ: A Ga-enwe Curlọ Na obodo 15 na ngwụcha izu
Nzukọ Nkata ebe Can nwere ike nweta nsonaazụ kacha mma
Ndepụta nke Serin2 Pvp Servers dị ugbu a
Oge ntanetịala nọ na ntanetị
Nkeji Ikpeazu: Ewepụrụ ụfọdụ Coronavirus
Onye isi ala Erdoğan: Oge mgbago nke 65 afọ ga-aga n'ihu
Onye isi ala Erdogan: N’agha wepụrụ ihe mgbochi njem na gburugburu
Exgbọ mbufe mbufụt nke gafere Marmaray rutere na Germany
Ọdụ Istanbulgbọelu Istanbul Ghọrọ Buildinglọ Akwụkwọ LEED buru ibu kachasị nke ụwa
Anma ọkwa Obi endertọ: A ga-arụ Ọrụ Railway Diyarbakır Kurtalan Line
Council Council nke Sayensị na Teknụzụ nke Turkey, Informatics na Security Security Center maka Nnukwu Nchọpụta Ọgbara Elu Ọhụrụ so ndị mmadụ iri isii ahụ goro ọrụ na Institute. [More ...]
Airportgbọ elu Istanbul, nke bụ HUB zuru ụwa ọnụ na afọ mbụ ya na ụlọ ya pụrụ iche, akụrụngwa siri ike, teknụzụ dị elu na ahụmịhe njem dị elu, na-enye ihe ịga nke ọma ọhụụ. [More ...]
Nzaghachi ngwa ngwa maka okporo ụzọ gbajiri agbapụ na Ordu
Ezumike ikuku na Isi Obodo
Minista na-ahụ maka nchekwa mba Hulusi Akar kwupụtara na mkpokọta na iwere ga - amalite na 31 Mee. Dabere na nkwupụta nke Minista kwuru, n'okpuru onye isi nke Minista A Defence Akar, Onye isi ndị agha General Gen. Yaşar [More ...]
Ọrụ si Turkish F-16s na Asos Region na Northern Iraq
Kedu ụdị ụgbọ elu bụ F35?
N'ime ogo nke ugboala Bursa Azụmaahịa, Nrụ ọrụ, Superstructure na Olunye Ngalaba UR-GE nke Bursa Chamber of Commerce and Industry (BTSO) rụrụ, afọ a, US [More ...]